Aya angave mutsauko pakati peiyo iPhone 7 uye 7 Pro | Ndinobva mac
Runyerekupe rwe iPhone 7 rwunotiratidza kuti Tim Cook haazounze kwete maviri chete mamodheru ayo akasiana pakukura uye bhatiri, asiwo muenzaniso wechitatu uyo ​​waizouya kuzogutsa chikamu chehunyanzvi.
Kana ichivhura chishandiso chemadhora mazana masere hachina kukwana, Apple inofunga kuvhura kusvika kumatatu, nechinangwa chekupfuura makwikwi uye kukurudzira vashandisi kuti vawane iyo yekuwedzera modhi, sezvo isiri iyo inodhura kwazvo, mutengo wayo Zvinoita sezvakakodzera kana tinoienzanisa nePro, nzira inoshandiswa zvakanyanya uye inoshanda kushambadzira. Ehezve, semunyori uye mudiwa wechiratidzo chandinozvibvunza, ko mamodheru ese achasiyana papi nemutengo?
1 Zvimwe zvirinani: iPhone 7
2 Uyezve uye Pro, kubva kune yakaenzana kune irinani
Zvimwe zvirinani: iPhone 7
Parizvino mutsauko uripo pakati peiyo iPhone 6s uye 6s plus ndiwo iwo skrini, iyo kamera inosimudza uye bhatiri. Kunze kwekunge iwe uchida mahombe mahwindo, hausi kuenda kune iyi modhi. Iyo nyaya yehukuru, kwete mashandiro kana maficha. Izvo zvave kusvika ikozvino, asi zvinhu zviri kuzochinja. Apple inoda kuvhura yayo iPhone yakanangana neanowedzera elitist nehunyanzvi chikamu, uye panguva imwechete ichiisiya kuitira kuti vashandisi vakajairika varambe vachiitenga, kunyangwe pamitengo yakawandisa.
Maererano nerunyerekupe, iPhone 7 ichave nebhatiri rakawanda. kamera iri nani ine lenzi hombe yaigona kuita isina chiteshi chefoni uye pamwe ingangouya nechero yakasarudzika software. Iyo Plus modhi ichave yakakura kupfuura yakajairwa imwe, 5,5 inches, kungofanana neiyo iPhone 6s plus. Ichava nebhatiri rakatowanda, iro randinowana rakanyanya kurova. Kamera iri nani zvishoma pane iyo 4,7-inch modhi uye zvishoma. Iyo yakafanana yakakura. Pane kudaro, iyo Pro modhi ndiyo ichave inotishamisa nezvinhu zvisinga fungidzike, kana izvo ndizvo zvatave tichiona mukudonha uye runyerekupe rwakapararira kutenderera newebhu.
Uyezve uye Pro, kubva kune yakaenzana kune irinani
Iyo iPhone 7 Pro ingadai iine Smart Connector, senge iyo Pro Pro, isingazivikanwe kana ichavandudzwa gore rino kana kwete. Izvo zvatisingazive ndizvo zvichaitwa neiyi yekubatanidza pane iyo iPhone, asi Apple ichave iine zvishongedzo zvakagadzirira kana chimwe chinhu chingaite musoro weichi chinongedzo. Ichave iine lens mbiri pane yekumashure kamera, kugona kurekodha uye kutora mafoto mune yehunyanzvi modhi isina kumboonekwa pane iyo iPhone. Pamwe inowedzera musimba ne1Gb yakawanda yeRamu kana chimwe chakadai.
Mukupedzisa, kuitira kuti vasataure kuti iyo ipfupi pane simba kana kamera, ivo vachagadzira modhi inokwanisa kupfuura zvese zvakaonekwa kare, asi ichave inodhura zvekuti vashoma kwazvo vanozokwanisa kuiwana. Ini ndinofungidzira kuti mitengo ichave ingangoita € 849 yeiyo base vhezheni yeiyo 7 iPhone 4,7, iyo ichave iine 32Gb, € 949 yemuenzaniso wekuwedzera uye € 1049 yePro, inodhura kupfuura Macbook Air. Zvinoshamisa kuti tasvika sei.
Tichabuda mukukahadzika munaGunyana, kusvikira panguva iyoyo isu hatina chinhu kunze kweguhwa uye kudonha. Iwe unofarira here pfungwa yePro modhi pane iyo iPhone?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » iPhone » Aya angave mutsauko pakati peiyo iPhone 7 pamwe uye 7 Pro
Xiaomi's "MacBook" iri kuswedera padyo nepadyo